Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa oo howl shaqo ku tegay dalka Uganda
Boosaaso:-Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa ee magaalada Boosaaso Dr.Dayib Ali Mohamed, ayaa waxaa u safar shaqo maalmihii la soo dhaafay ku joogay wadanka Uganda , Guddoomiye ku xigeenka Jaamacada Bariga Afitka Dr Dayib Cali Maxamed ayaa waxaa uu kula gaar ah l yeeshay Ardayda Soomaaliyeed ee wx ka barata dalka Uganda.
Kulanka oo ahaa mid si wanaagsan loo soo agaasimaya ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururja Ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo weliba ardaydaSoomaaliyeed ee wax ka barata Jaamacadda Kampla International University(KIU), kulanka ayaa waxaa uu ka dhacayHoolkaweyn ee jaamacadda KAI.
Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa ee magaalada Boosaaso Dr.Dayib Ali Mohamed oo kulanka ka hadlay aya waxaa uu aad u bogaadiyey haniga sare ee ku jira Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda isagoo ku tirtirsiiyey in ay ku fara adaygaan wax barashadooda si ay guul uga gaaraan.
Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa ee magaalada Boosaaso Dr.Dayib Ali Mohamed ayaa kula dardaarmay in ardaydu aysan noqon kuwa khasaariya fursada ay siiyen waaliidkood oo kharash badan ku bixiya in ay guulaystaan ubadkooda arrinkaas oo ah buu yiri Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa wax u baahan in ay Ardaydu ka baaraan degaan.
Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa ee magaalada Boosaaso Dr.Dayib Ali Mohamed ayaa u sheegay in Ardayda loo baahan yahay markii ay dhamaystaan waxbarashadooda in ay dalkooda hooyo ay dib ugu soo noqdaan si dadkooda iyo dalkooda u anfahaan iyo in ay u diyaar garoobaan in ay noqdaan jiilkii dalka Soomaaliya ka saari lahaa dhibaatada uu ku jiro.
Ugu danbayntii aya Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada bariga Africa ee magaalada Boosaaso Dr.Dayib Ali Mohamed wuxuu aad u gu booriyay Ardayda in ay noqdaan safiiro looga daydo dhinac walba sida akhlaaqda , diinta ayna ilaaliyaan magaca ay xanbaarsan yihiin Soomaaliyeed iyo Islaanimo. Gudoomiye ku xigeenku Jaamacada bariga Africa ayaa intii uu joogay dalka Uganda waxaa uu kulan gaar ah la yeeshay Ardayda ka timid degaanada Puntland iyo kuwa kasoo qalin jabiyay Jaamacada Bariga Africa(EAU).